Unesifo e-US, Israel, Palestine! Usinda njani? Abafazi aba-3 babelana ngamabali abo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Unesifo e-US, Israel, Palestine! Usinda njani? Abafazi aba-3 babelana ngamabali abo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iihotele kunye neeholide • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • IPalestine Breaking News • Safety • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ihlabathi liza kunye. ICoronavirus ayazi mida, ayinanceba kwaye ifuna ukubulala. Kwangelo xesha, i-COVID-19 inokuba lelona thuba lethu loxolo kunye nokudibana. Le mfazwe yeHlabathi inotshaba olunye olungabonakaliyo- kwaye uluntu lonke lukwicala elinye lomlo.
Ukusukela ngemva kwemvulo yangoMvulo, amanye amatyala e-coronavirus ayi-1.925,179 aqinisekisiwe kwihlabathi liphela. Ubuncinci abantu abangama-119,701 babhubhile kwi-COVID-19, 447,821 efunyenwe kwakhona.
Esi sifo sibangelwa yi-pathogen- kwaye amashumi amawaka akwimeko ebucayi. Ubhubhane ubangele ukonakala kwezoqoqosho ngokubanzi, izinto ezo ezinokuthi ziqale ukuqondwa ngokupheleleyo xa kuqhambuke isithintelo.
Kude kube lelo xesha, phantse isiqingatha sabemi behlabathi sihlala siphantsi kwamanqanaba ahlukeneyo okutshixwa, uninzi luthintelwe ngokupheleleyo ekushiyekeni kwamakhaya abo. Ewe, ukubandezeleka kudlulela ngaphaya kwabo banesifo. Bambalwa, ukuba bakhona, abasindileyo ebunzimeni, inyani ethe yazisa ekugxininiseni kungekuphela ekubeni sesichengeni kodwa, okona kubaluleke kakhulu, luluntu lwethu ekwabelwana ngalo.
Oku kungumzekelo kwabo baphinde bachacha kwi-COVID-19, abathathu kubo babelane ngamabali abo neMedia Line. Nanga amabali ama-3 amangalisayo avela kwabasetyhini aba-3 nakwamanye amazwe ama-3: i-USA, Israel, nePalestine.
Inkundla yaseMizel, eLos Angeles, eUnited States
Ngaba ungasitshela kancinci malunga nawe?
Ndizalelwe ndakhulela eDenver, eColorado, kodwa ngoku ndihlala eLos Angeles. Ndisebenza njengeshishini elinobuchule kunye nomcebisi wezomthetho, ndigxile kwindawo engenzi nzuzo. Ndikwasebenza kwibhodi yabalawuli kwinkampani yoluntu kunye nemibutho eliqela engenzi nzuzo ekuhlaleni nakwilizwe lonke.
Inkundla yeMizel. (Ngobubele)
Kutheni ucinga ukuba ungenwe yicoronavirus?
Ndijongene noxinzelelo olukhulu malunga nalo lonke utshintsho olwenziwe ukulwa nokusasazeka kwe-COVID-19, kubandakanya ukurhoxiswa kwezikolo, ukuhlala ekhaya kunye nayo yonke into eza nayo. Kwakukho iintsuku ezimbalwa endandisoyika ngazo - xa ukuphefumla kwam kwaba nzima kakhulu - kwaye ndandinexhala lokuba ndingabiza bani ukuze ndihoye abantwana bam ukuba kufuneka ndiye esibhedlele. Njengokuba ndibukele okwenzekayo kubantu kwihlabathi liphela abagula kakhulu, ndigcwele umbulelo ngento yokuba ityala lam beliphakathi. Ndizithatha njengomnye wabanethamsanqa.
Andiqinisekanga ukuba ingaba yayiyiyo na i-coronavirus kuba ndandikwinkomfa [yeKomiti yezeMicimbi yoLuntu yaseMelika] [eWashington,] DC, naseColorado. Ukusukela oko bendi hamba kwaye ngenxa yokuba nomkhuhlane kunqabile kum, ugqirha wam wandicebisa ukuba ndiyokuvavanywa e Cedars-Sinai [Medical Center], endiyenzileyo ngo-Matshi 14. Oku kwakusekuqaleni kwayo yonke into, [kodwa] isakhuselekile malunga nokuqhutywa kovavanyo lwe-coronavirus ngenxa yokunqongophala esele ikhona.
Kuthathe iintsuku ezintandathu-de kwango-Matshi 20 -ukufumana iziphumo zam. Ukuba ndandingazange ndithathe amanyathelo okhuseleko, andazi ukuba bangaphi abantu [endandingasulela] kubo.
Yathini impendulo yakho yokuqala emva kovavanyo?
Ndothuka. Umkhuhlane wam wawuyi-100.6 ngoku kuphela ngokukaCelsius ibe wawuthabatha iintsuku ezimbini ukuya kwezintathu kuphela.
Ukusuka kwinto endiyaziyo, abantu bebexela umkhuhlane ophezulu. Ndandinobunzima esifubeni sam kwaye, xa zizonke, ndiziva ndidiniwe. Ngexesha lokufumana kwam iziphumo, uninzi lweempawu zam [zazidambile].
Ndaqala ndenza umthambo ndaya ndisiba mandundu ngakumbi kodwa hayi ukuya kwinqanaba lokuya esibhedlele.
Ngaba ucinga ukuba abasemagunyeni base-US benza uvavanyo olwaneleyo?
Owona mngcipheko mkhulu nokuba ngumntu oneempawu zesifo sombefu akanako ukuhlangabezana neemfuno zokuvavanywa. Ngokubanzi kufuneka ube ungaphezulu kweminyaka engama-65 ubudala, ube [nobuzaza] iimeko ezisisiseko, okanye wazi ukuba ubhentsiswe ngqo. …
Ngaphandle kovavanyo olwandileyo okanye ukunyanzeliswa okungqongqo kwezikhokelo zokuvalelwa njengakwa-Israyeli, andiboni ukuba thina [e-US] sizokumisa njani ukusasazeka kwentsholongwane. Kukukhula kokucacisa oko kothusayo.
Benze ntoni abantwana bakho?
Abantwana bam, uZoe, 14, noIsabella, 13, babekhathazekile. "Sivunyelwe ukuba sixelele nabani na kubahlobo bethu," babuza. … I-coronavirus ayisiyonto sifuna ukuba neentloni ngayo. … Bendihlala ikakhulu kwigumbi lokulala naseofisini yam, esekhaya. Xa ndikufutshane nabantwana kunye neendawo eziqhelekileyo, bendinxiba imaski kwaye ndihlala ndihlamba izandla.
Inkundla kaMizel (R), kunye nabantwana uZoe noIsabella. (Ngobubele)
Lithini ingcebiso onayo kwabanye abahamba koku?
Eyona nto inokwenziwa ngumntu wonke kukukhathalela amajoni abo omzimba kunye neentsapho zabo. Abantu kufuneka bathethe noogqirha babo ngaphambi kokuba baye kwigumbi likaxakeka okanye bazame ukuvavanywa.
Akukho zimaski zabasebenzi bezempilo. Ulwazi alucacanga. Kwa-Israyeli, izikhokelo zivela phezulu. Apha, umongameli, iirhuluneli, kunye namaZiko okuLawula nokuThintela izifo bonke bathetha izinto ezahlukeneyo. Imbi kwaye ibangela ukudideka kuye wonke umntu.
Baninzi kuthi abafumene le ntsholongwane kwaye abaninzi abangaziyo ukuba banayo. [Imeko] ibangela ukuhonjiswa ngabantu kwaye abantu bayoyika kwaye abayifumani imiyalelo ecacileyo. Ke, banokuba baphaphile kakhulu [okanye bayacima] kwaye abayikhathaleli [ingxaki].
UCarra Glatt, iYerusalem, uSirayeli
Ndicela uzazise ngokufutshane?
Ndathutha [ndaya kwa-Israyeli] kancinci ngaphantsi kweminyaka emithathu edlulileyo. Ndisuka eNew Jersey kwaye ngoku ndifundisa uncwadi lwesiNgesi kwiYunivesithi yaseBar-Ilan.
UCarra Glatt. (Ngobubele)
Uye wathi ubuse-US emva koko wabuyela kwa-Israyeli. Ngaba uye wazikhetha ngokwakho iintsuku ezili-14?
Inye into enika umdla malunga noku: ndibuyile kanye ngaphambi - njengeeyure eziyi-12 ngaphambili - [urhulumente uphumeze umgaqo-nkqubo] kwaye khange ibuyele mva. Ngethamsanqa, ndiye ndahlala ndedwa ukuze ndikhuseleke. Kodwa ngokomthetho kwakungekho mfuneko yokuba ndenze njalo. Kwakungenangqondo kwaphela. …
Ucinga ukuba ungayifumana phi intsholongwane?
NdandiseNew Jersey ndindwendwele usapho lwam. Ndiyarhana ukuba ndifumene [i-coronavirus] kutata wam kodwa zange wavavanywa ke asazi nyani. Isizathu sokuba ndicinge ukuba kungenxa yokuba wayenomhlobo osenyongweni awayephuma nesidlo sasemini kunye naye, kwiintsuku ezimbalwa kamva, walala esibhedlele.
Ngaphambi kokuba ndiye kwa-Israel, utata wehla eneempawu ezifana nomkhuhlane. Waya kugqirha, endaweni yokumnika uvavanyo lwe-coronavirus, baqala bamnika uvavanyo lomkhuhlane, olwalunethemba. Uye wenza iX-ray yesifuba wathi ugqirha, “Owu, icacile loo nto, ke asizukuvavanya [intsholongwane].” Emva kokuba ndifunyenwe, kwabonakala ngathi wayenayo. Ngelo xesha, wabiza [ugqirha] kwakhona kwaye waxelelwa, "Kulungile, awusenayo ifiva ngenxa yoko asizukuvavanya."
Ekupheleni kohambo lwam, ndandifanele ukuya kwinkomfa yamazwe aphesheya eNew Orleans emva koko [urhulumente wase-Israel uthathe isigqibo sokuba wonke umntu] owenza njalo kufuneka angene yedwa xa ebuyela kweli lizwe. … Ukusukela ngelo xesha ukuya phambili, andizange ndishiye indlu yabazali bam. Ndandingathi, "Ndizokuhlala apha kakhulu ndingazivezi ebantwini." Enye indawo apho ndandinokwasulelwa khona yayikukubaleka [ukubuyela kwa-Israyeli], kodwa andikhe ndive ukuba kukho [abagibeli] abagulayo.
Ngaba ungawachaza amanyathelo owathathayo wakuba uqale ukuziva ubonakalisa iimpawu?
Xa ndibuyela kwa-Israyeli ndisuka e-US, bendihlala ndifumana i-jet lag entle. Kodwa ukuze ndikhuseleke, bendithatha ubushushu bam yonke imihla. Ndabuya ngo [Mvulo, Matshi 9] kwaye ndicinga ukuba kwakungoLwesine okanye uLwesihlanu apho ndafikelwa ngumkhuhlane kwaye ndaziva ndiphelile. Ke, kwakungange veki kamva apho ndafowunela i-MADA [Magen David Adom service emergency] kuba bakucela ukuba unxibelelane nabo kuphela ukuba unefiva engaphezu kwama-38 degrees celcius. Yayikuphela komhla endaziva ndigula ngawo.
Ungayichaza inkqubo yovavanyo?
Xa ndibiza i-MADA, ibisithi, "Cofa u-1 ukukhetha okuqhelekileyo kwaye ucofe u-2 nge-coronavirus." Ndicinga ukuba inkqubo sele itshintshile kwaye bajonge abantu ngakumbi. Kodwa ngeloxesha ndabaxelela ubushushu bam. Ndaphinda ndathi andinazo ezinye [eziphambili] iimpawu ngaphandle kokudinwa. Bendi ngekhohlela okanye nantoni na. Bandibeka kuluhlu kwaye beza ngentsasa elandelayo. Umntu othile uza nezixhobo zokukhusela ezizeleyo kwaye akunike i-swab emqaleni nasempumlweni. Kuhle ukuba ungonwabanga. Ndizifumene iziphumo zam emva kwentsuku ezimbini ndothuke nyani ngoba ngeloxesha bendiziva ngcono.
Ngaba ikunike ukuqondwa okungcono kobunzima bomcimbi-wokuba abantu abangafakwanga emzimbeni banokuhamba ngeshishini labo bengazi ukuba bosulelekile?
Ewe. Ngokukodwa kuba ukuba bendise-US, akukho ndlela ngendiya kuvavanywa ngayo. … Ndazi inani labantu abacinga ukuba banayo. Abantu abangakhange bavavanywe baye bathi oogqirha, "Ewe, ndiqinisekile ukuba une-coronavirus." Umzimba wam wawususwe kwi-jetlag kwaye emva koko ufumana ibug encinci kwaye ke yile nto. Ke, ndicinga ukuba kufuneka kubekho iitoni zabantu abahamba hamba abangenalo nofifi lokuba bosulelekile. Ukusuka kwinto endiyiqondayo, enye ingxaki kukuba abantu bayosulela kakhulu kusuku olungaphambi kokuba baqale ukuziva begula.
Utshilo ukuba uhlala nomntu oza kutshata naye Ngaba bekunzima kuni nobabini?
Kukho indawo efanelekileyo kwaye kukho into oyenzayo xa usenza. Kuqala kwinto zonke, waye wavavanywa kwaye ndacinga ukuba unale ntsholongwane kuba, ngokuhlekisayo, wayenokukhohlela okubi. Kodwa wayenezinto ezimbi. Sasihlala kumagumbi ahlukeneyo kodwa kuba sinendawo enye yokuhlambela, andinokwazi ukwahlukaniswa. Ndisula imiphezulu nayo yonke into. Ndizive ngcono kwaye ibingumbandela nje wokulinda uvavanyo lwethu olulandelayo. Sasihamba ngokuhlala ngaphakathi endlwini, sihlala ngeemitha ezi-2.
UCarra Glatt kunye nomyeni. (Ngobubele)
Kumazwe amaninzi anokunqongophala kweekiti zovavanyo, awakuvavanyi kwaphela. Bathetha nje ukuba ukuba ubenomkhuhlane iintsuku ezintathu kwaye ngaphezulu kweveki okanye ezimbini ukusukela ekuqaleni kweempawu, ungaphuma. Kwa-Israyeli, kwafuneka ndifumane iziphumo zovavanyo ezimbini ezimbi ngaphambi kokuba ndicocwe.
Inkampani yam yeinshurensi yezempilo yayinditsalela umnxeba kabini ngosuku ukuba ingene, kwaye ngexesha elithile xa ndandingenawo umkhuhlane, umntu othile wathi kum, “Ndikubeka kuluhlu ne-MADA ukuze uphinde uvavanywe kwakhona.” Emva kweentsuku ezininzi, ndatsalela umnxeba i-MADA, kodwa bathi andikho kuludwe. Bendihamba ngapha nangapha kwaye ndicinga ukuba kukho ukungaqondani. Kodwa kanye emva kweeveki ezimbini emva kokubuza kwam kwasekuqaleni, i-MADA yanditsalela umnxeba isithi ndiza kuvavanywa ngosuku olulandelayo. Ke, loo nto yayiyinto ephazamisayo. Kodwa, ekugqibeleni, ndaphinda ndaphinda ndavivinywa kwaye ndilungile ngoku.
Ngaba unayo umyalezo wethemba okanye inkuthazo kwabanye abahlangabezana nobunzima obufanayo?
Ndicinga ukuba ndizikhumbuze ukuba ngokucacileyo kufanele ukuba siyithatha kakhulu, kakhulu. Kodwa kwangaxeshanye ukuqonda ukuba uninzi lwabantu [abasulelwa yintsholongwane], iziphumo ziya kuba mnene. Ndiyathetha, le yayingeyiyo eyokugula eyakha yakho. Ndinezinto ezoyikeka kancinci kwaye ndiziva ndisiba mandundu. Ndicinga ukuba eyona nto inzima kum yayikukungabi nolwazi oluchanekileyo lokuba ingxaki izophela nini. Kodwa yenzekile kwaye [iya kuthanda uninzi lwabantu]. Awulazi ixesha elichanekileyo kodwa ekugqibeleni uza kufika kwindawo apho uthi, “Olu lusuku endiza kulunga ngalo.”
UMariana Al-Arja, eBhetelehem, kwi-West Bank, ePalestine
Igama lam ndinguMariana kwaye ndingumPalestina ohlala eBhetelehem. Ndisebenza njengomphathi jikelele wehotele iAngel, elishishini elinosapho.
Ihotele iAngel, iBethelem, iWest Bank. (Ngobubele)
Kwaye wazi nini ukuba wosulelwe yi-COVID-19?
Into eyenzekileyo kukuba sinamaqela asuka eGrisi kwaye bendixhalabile kukuba kuba abakhenkethi bebesabuya kwisikhululo seenqwelomoya, sinokubona amatyala. Ngenye imini ndafowunelwa ngomnye umntu okwi-arhente yezohambo [sifumana abathengi] abathi abanye abantu ababehleli ehotele ukusukela ngomhla wama-23 ukuya kowama-27 kweyoMdumba kwafunyaniswa ukuba bane-coronavirus emva kokubuyela ekhaya.
Bendingazi ukuba akukho namnye kuthi osulelweyo. Ke, into yokuqala endayenzayo [yayikukutsala umnxeba] kwaye ekugqibeleni ndafika kwiofisi yomphathiswa wezempilo [eRamallah]. Bandixelele ukuba kufuneka ndibuyise bonke abasebenzi bam ehotele ukuze ndibavavanye.
Ke, ufumanise ukuba une-coronavirus ngaphambi kokuba uve naziphi na iimpawu?
Ewe, ngokuchanekileyo. Kwaye ukuba ibingeyiyo iarhente yokuhamba, ngekhe ndazi malunga nayo. Khange ndibenazimpawu kodwa isibini sabasebenzi bam besigula kwaye bengakwazi ukuza kusebenza phakathi kukaFebruwari 27 noMatshi 1. Babenempumlo kunye nokukhohlela kwaye bafuna ukuhlala ekhaya. Kwakungaphambi kokuba sazi nantoni na [malunga neqela laseGrisi].
Ngaba okwangoku uhleli wedwa ehotele?
Hayi. Ihotele ngoku ayinanto kodwa malunga nama-40 kuthi ngaphambili bebevalelwe ngaphakathi. Kwakukho abantu abavela e-US nangaphezulu kweshumi elinambini labasebenzi. Sahlala apha ukuqala ngoMatshi 5 kwaye amaMelika aphuma kuphela nge-Matshi 20. Kodwa ndahlala enye iveki nomnye wabasebenzi bam kuba iimvavanyo zakhe zazibuya zikhona.
UMariana Al-Arja, ngaphakathi eofisini yakhe ngexesha lokuvalelwa yedwa. (Ngobubele)
Wonke umntu wavavanywa ngaphambi kokuba avunyelwe ukuba ahambe?
Ewe, kuye kwafuneka sineziphumo zovavanyo ezintathu ezimbi ngaphambi kokuba siphume ehotele. … Emva koko, ndabuyela ekhayeni lam ndaza ndahlala apho ezinye iintsuku ezili-14 emva koko kwafuneka ndenze olunye uvavanyo.
Ngaba ukhathazekile ngokubuyela ekhaya ngenxa yosapho lwakho?
Ndandihleli endlwini nomama kunye nomntakwethu, owayesulelwe nayintsholongwane. Khange sizivalele kumagumbi ethu kuba besele sivavanyile kathathu. Kwakungekho nto yakuzixhalabisa ngayo. Sizijongile nje de kwaba luvavanyo lwesine.
Ukhankanyile ukuba ihotele lishishini losapho. Kufuneka kubekho umrhumo wezoqoqosho onxulunyaniswa nokuwuvala ...
Ngokuqinisekile. Sibe namava owahlukileyo kuba ezinye iihotele bezivaliwe zonke kodwa bekufuneka sihlale sivulekile, okuthetha ukuthi sisebenzisa amanzi, sisebenzisa umbane, kufuneka si-odole izinto kubanikezeli, njlnjl... Kwakhona, ndifumene nje imvume yokubuyela ehotele kuba kufuneka ndihlawule imivuzo yabasebenzi bam.
Kuya kufuneka uhlawule abasebenzi bakho nangona ihotele ingasebenzi?
Ewe. Baneentsapho; bafuna uncedo. Ke into endiyenzileyo ibikukubanika isiqingatha somvuzo wabo ngoMatshi kwaye ndiza kuqhubela phambili ngo-Epreli.
Ngaba unayo nayiphi na ingqiqo xa ishishini lokhenketho lingaqala ukuphindaphinda?
Izinto ekugqibeleni ziya kubuyela esiqhelweni. Iya kusebenza kwaye mhlawumbi ibengcono kunangaphambili. Kodwa sidinga ixesha elininzi ukubuyela eBhetelehem. Ndicinga ukuba sidinga malunga nonyaka omnye de sibuye sime ngeenyawo kwakhona. [Ingxaki yezempilo] ayihambelani nje kuphela nale ndawo - zizikhululo zeenqwelo moya zonke kwihlabathi jikelele. Wonke umntu uchaphazele uqoqosho, naye. Ke, abantu abazukuba nayo imali yokuhamba nokuba izinto ziqala ukuvula kancinci. Akuyi kuba lula. Kodwa emva kwayo yonke le nto, ndicinga ukuba sinekamva eliqaqambileyo.
Okokugqibela, akhona amagama okhuthazo anokugqithiswa ebantwini?
Amava eAngel Hotel ebemnandi ngoba sihlala apha, mna nabasebenzi bam, silusapho. Besine group ka WhatsApp sincokola imini yonke. Ukuba nabani na ufuna nantoni na - uncedo oluthile, ukutya, into evela kwiintsapho zabo-banokuyifumana. Sinabantu abasisebenzelayo ngaphandle kwaye senza iindwendwe zive ngathi zisekhaya kwaye zikhuselekile. Ukuhlala unethemba kwakubaluleke kakhulu.
umthombo: Umgca weendaba Umbhali: FELICE FRIEDSON KANYE CHARLES BYBELEZER